Home Wararka DFS oo looga digay heshiiska ay la gashay 31 shirkado Kaluumaysi
DFS oo looga digay heshiiska ay la gashay 31 shirkado Kaluumaysi
Iyada oo ay soo kordhayso dareenka laga qabo warqadaha ruqsada oo ay Dowlada Fedaraalka siisay in ka badan 30 shirkadood oo shiinays ah ayaa hadana waxa ka aamusan Baarlamaanka Soomaaliya oo mas’uuliyadiisa ahayd in uu la xisaabtamo dowlada Soomaaliya.
Wargeyska Quartz oo ay Xarumihiisa dhexe ku kala yaalaan magaalooyinka New York iyo London ayaa maanta soo saaray Warbixin dheer oo ka hadlaysa heshiiskii ay DFS la gashay 31 Shirkado Kaluumeysi oo laga leeyahay dalka Shiinaha, kuwaasi oo loo fasaxay inay muddo sannad ah ka kaluumeystaan Badda Soomaaliya oo ah tan ugu dheer badaha Qaaradda Afrika.
Wargeyska waxa uu qormadiisa ku muujiyey in DFS ay ku han weyn tahay inuu Heshiiskaasi qeyb ka qaadan karo Kororka Dhaqaalaha dalka balse ay u badan tahay in khayraadka shacabka Soomaaliyeed lagu dhaco.
Wargeyska Quartz waxa kale oo uu qoray in ay maraakiibta la siiyaya warqadaha aqoonsiga ay leeyihiin Ururka Kaluumeysatadda Shiinaha ee loo yaqaan Overseas Fisheries Association, taasi oo ah Koox ka kaluumeysata Baddaha Fog, lana asaasay sannadkii 2012-kii, waa sida uu qoray Wargeyka Quartz.
Maraakiibtaasi oo bishan bilaabay inay ka jilaabtaan Badda Soomaaliya ayaa waxaa loo fasaxay inay ka hawl-galaan ilaa 24 nautical miles oo u dhiganta 44-KM, si loo ilaaliyo hawlgalladda kaluumeysiga ee heerka yar. Wargeysku waxa kale oo uu xusay in laga yaabo inay Burcad-baddeeda dib u soo laba-kacleeyaan, isla markaana ay qafaashaan Maraakiibta isticmaala badda Somalia, waa sida uu qoray Wargeyskaasi.
Dhinaca kale, Wargeyska Quartz waxa uu qoray in markii la shaaciyey Heskiiska ay DFS la gashay Shirkadaha Kaluumeysiga ee dalka Shiinaha waxaa warar aan la hubin la soo dhigayey Barta Twitter-ka, taasi oo lagu sheegay in Dowladda Shiinaha qaab dayn ah dib-u-dhisi doonto Dekedda magaalladda Muqdisho, iyadoo dhaafsan doonta Xuquuqda Kalluumeysiga iyo inay qeyb ka kontoroolaan Dekedda, ilaa laga bixinayo Kharajka Daynta, waa sida lagu qoray Wargeyska Quartz oo soo xigtay qoraalo la soo dhigay barta Twitter-ka.
Shirkadaha la siyayay warqadaha ruqsada ayaa waxaa wakiil ka wada ah Ra’iisal Wasaarihii hore Cumar Cabdirashid iyo RW Xassan Cali Kheyre. MOL ayaa waxaa ay dhwaan idin soo gudbin doontaa qoraal baaritaan ah oo ay ka sameeysay doorka Kheyre iyo Cumar Cabdirashiid ku leeyihiin shirkadaha iyo kaalinta uu ka qaatay Safiirka Cusub ee Soomaaliya u fadhiya dalka Shiinaha Cawaale Kulane.
Next articleMW Farmaajo oo magacaawday Garsoorayaal u adeega danahiisa
Taliyaha Cusub ee ciidamada Kenya oo ku sugan Soomaaliya
AMISOM oo looga digay in ay qayb ka noqoto dagaal dhax...